Date My Pet » 7 Hevitra Unique tanteraka Fa A Date
Last nohavaozina: Oct. 20 2020 | 3 min namaky
Mampiaraka, izahay rehetra niainan'izy ireo daty tsara, misy vendrana / mahonena ireo, ny sasany tsy hahazo aina mendrika mahatsiravina ireo ary manantena ny sasany mahafinaritra / mampientam-po ireo koa. Koa inona no mahatonga ny daty mahagaga? Mazava ho azy fa ny olona izay mihaona betsaka manao izany, Mino aho fa na izany aza misy kokoa ho azy noho ny. Amiko, ny zavatra izay tena afaka manao daty miavaka dia ny nizara traikefa ianao miara-, ary ny fifandraisana mitondra ity.
Rehefa mihaona amin'ny trano fisotroana na Pub ny daty voalohany tena Cliché sy whilst manana sakafo Tsara, dia afaka mahazo mankaleo rehefa manao izany isan-kerinandro ny daty alina amin'ny vadinao. Na dia daty voalohany na tsy tapaka isan-kerinandro 'daty alina' tena zava-manitra izany tamin'ny opting hanao zavatra mahafinaritra sy ny tanana ao amin'ny.
Fantatrao ve fa nizara zavatra miteraka fifandraisana eo amin'ny olona? Dia miasa toy izao. Rehefa misy karazana traikefa ho fihetseham-po ihany koa izay mandeha miaraka aminy. Noho izany ohatra raha abseil-baratra dia mety hahatsapa ny sasany nervousness, angamba fampihorohoroana, adrenaline sy avo. Rehefa nizara manana traikefa amin'ny olona iray hafa, ka handeha amin'ny alalan'ny fihetseham-po toy izany koa miara-, Lasa misy fatorana izany. Fa zavatra iray azontsika tsara izy samy izy ary manana zavatra hiresaka momba, amin'ny vehivavy na izany aza dia misy azo tsapain-tanana kokoa antony. Rehefa nizara vehivavy iray (tsara na mampientam-po) traikefa amin'ny olona iray simika antsoina hoe Oxytocin Navoaka tamin'ny vokany raha ny marina ny vatantsika. Izany no bonding hormonina ary hahatonga antsika hahatsapa ho akaiky kokoa ny olona isika manana ny traikefa amin'ny. Mpivady amin'izao fotoana izao fa ny sasany tsy hanao zavatra adrenaline mampientam-po, ary ny sasany endorphins sy serotonin tsy hanao zavatra mahafinaritra, ary tsara tarehy izany kirina fifangaroana. Rehefa mijery izany fomba izany dia mora ny mahita ny fomba lavo ny olona dia mampiaraka.
Ka ahoana no ampiharana izany amin'ny foto-kevitra ny mampiaraka? Easy, te-drafitra daty izay miteraka fa nizara zavatra niainany, ary ahitana ny mahafinaritra sy mahaliana singa. Ny vaovao tsara dia hoe ara-dalàna, andavanandro ny olona izay tsy Modely-alikes fijery mbola afaka mamorona ireo karazana traikefa. Ary izany dia manome anao ny sisin'ny ny ny mpifaninana. Inona no mahery ka ho liana amin'izy ho afaka hamorona izao ny traikefa, ary inona no fomba lehibe ny lalana fivoahana ny mahasarika. Rehefa mahatsapa fihetseham-po sy ny bonding mainka amin'ny olona iray hafa no mahatsapa tia azy ireo.
Ny soa hafa ny fisafidianana ny zavatra tsy manam-paharoa sy mahafinaritra noho ny daty dia izany dia ho tapaka ny ranomandry, izay zava-dehibe indrindra izany raha misy ny daty voalohany. Rehefa miasa ny fomba mba miara-mahandro ny pizza tsy manam-potoana firy ho an'ny mahatsiaro ho hafahafa. Ary afaka mamela ny fahafahana ara-batana sy mahazo flirty amin'ny hafa. Tena matetika sarotra ny mikasika olona iray anao ka zara raha fantatrao, rehefa teo amin'ny daty any amin'ny bara, na izany aza rehefa manao zavatra miaraka ampiharina mora kokoa izany. Raha toa ka tsy maintsy miara-miasa ny asa izay na dia tsara kokoa, tadidio fa nizara traikefa miteraka fifandraisana. Ary raha ny asa no voly sy hitanao ny tenanareo mihomehy Hanampy anao haka aina roa.
Ireto misy hevitra ho anao:
Miara-mahandro - Miara-mahandro dia afaka ny ho be dia be mahafinaritra. Azonao atao na ny boky ny fandrahoan-tsakafo, na mahandro lesona zavatra ao an-trano (mihevitra ho manana ho azy tsy misy daty voalohany).
Tanimanga - Ary izany dia tanana amin'ny safidy sy ny mety ho tena sexy. Eritrereto ny horonan-tsary 'Masina'. Ary ny tapany lehibe dia ny hoe hisy ny keepsake avy amin'ny daty amin'ny endrika na inona na inona natao. Ho azo antoka fotsiny ny daty dia mahafantatra ny hitondra akanjo taloha.
Ny mandeha amin'ny toerana tsara tarehy miavaka - Dia niresaka mikasika ny famoronana nizara traikefa ary raha tsy manana fotoana na ianao ao amin'ny teti-bola ho tafara-dia afaka ny ho tonga lafatra. Matetika ny olona no mora kokoa aminy ny hiresaka, rehefa miala voly, ary dia mandeha. Ary raha mifidy tsara any ho any izay manana toerana tsara tarehy afaka mampitombo izany ny zavatra niainany. Ny iray amin'ireo tsara indrindra hatramin'izay daty aho dia maka ny fivoaky ny holatra amin'ny ala. Soa ihany ny olona fantatro aho izay mampiaraka ireo dia azo hanina!
Zavatra sahisahy toy ny abseiling na zorbing - Fa adrenaline junkies izany tanteraka. No ataovy azo antoka ny daty mahalala izay mikasa ary ho izany alohan'ny!
Mandehana any amin'ny Zoo - Na inona na inona amin'ny biby lehibe. Petting ny biby afaka ny faly, ka ao ny toe-po ho an'ny tsirairay petting hafa. Plus izany dia manampy mba hamoaka ilay hormonina manan-danja rehetra Oxytocin.
Fitaingenan-tsoavaly - Fitaingenana soavaly tena mety ho nihomehy, ary koa ny zava-tsarotra, raha mbola tsy nanandrana azy eo anoloan'ny. Ary jereo ny namanao fotsiny no ho ny fanamby alohan'ny tahaka ny tsy ho an'ny olona rehetra.
Art fampirantiana - Raha samy toy afaka ianao izany ho mahafinaritra iarahana cultured sy traikefa. Photo fampirantiana dia mety ho mahafinaritra koa.